Home News Soomaali Dil iyo Dhac loogu gaystay Dalka koofur Africa
Soomaali Dil iyo Dhac loogu gaystay Dalka koofur Africa
Burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen xarun ganacsi oo ay lahaayeen muwaadiniin Soomaaliyeed.
Kooxda ayaa weerartay muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jiray Mahad Badal isaga oo ku sugnaa meel aan ka fogeen Goobtiisa Shaqada.
Sidoo kale burcada koofur afrikaanka ah ayaa magalada Rustenburg Ee Gobolka North West waxa ay ku dhaawaceen muwaadin Soomaaliyeed oo lagu Magacaabo Cabdullaahi Ambarela.
Kooxda Burcad ayaa ugu galay Goobtiisa Shqadii, iyada oo dhowr xabadood ku dhuftay.
Falalka isugu jira dhaca iyo dilalka loo geysanayo ganacsatada Soomaalida ee ku ganacsata waddankaasi koofur afrika ayaa muddooyinkii dambe sare u kacay kadib markii ay xoogeysteen dilalka loo geysanayo dhallinyarada Soomaalida ee halkaasi ku ganacsata.